काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सम्बोधन गरेका छन्। सार्वजनिक महत्वको विषयमा प्रधानमन्त्री ओलीले १२३ बुँदा सम्बोधन गरेका हन्। ओलीको सम्बोधन जस्ताको तस्तै सभामुख महोदय, –विधेयक अधिवेशनका रुपमा..
नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई कालोमोसो !
काठमाडौं । नेपाल वायुसेवा निगमका महाप्रबन्धक सुगतरत्न कंसाकारलाई उनकै कार्यकक्षमा कालोमोसो दलिएको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीको युवा संगठन क्रान्तिकारी युवा लिगले उनको कार्यकक्षमै पुगेर कालोमोसो दलेको हो..
पत्रकार रवि लामिछानेले श्रीमती ईशासँगको सम्बन्ध तोडे, दिए यस्तो स्पष्टिकरण
काठमाडौं । पत्रकार रवि लामिछानेले श्रीमती ईशा लामिछानेसँगको सम्बन्ध तोडेका छन् । करिब २५ वर्षसँगै सहयात्रा गरेका इशा र रविले केही दिन अघिमात्रै डिभोर्स गरेका हुन् । धेरैको घर मिलाएका..
यस कारण समझदार र असल मानिसले धन कमाउन सक्दैनन्
हामीले प्रायः सुन्ने गरेका छौँ, ‘सबैसँग राम्रो बन्न खोज्यो भने आफू नै पछि परिन्छ ।’ सच्चा र असल व्यक्तिले यसलाई प्रायः होइन जस्तो गर्छन् । तर पछिल्लो अनुसन्धानले बुढापाकाले भन्ने..
कैलाली । दोस्रो नेपाल आइडल रवि ओडकी आमा विष्नादेवी ओडको मृत्यु भएको छ। बुधबार बिहान पानी तान्ने पम्पबाट करेन्ट लागेपछि अस्पताल लैजाँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको प्रहरीले जनाएको छ। अन्दाजी..
फेसबुकले बनाउँदैछ क्रिप्टो करेन्सी, के हो क्रिप्टो करेन्सी ?
काठमाडौं । सोसल मिडिया कम्पनी फेसबुकले आफ्नै डिजिटल मुद्रा क्रिप्टोकरेन्सीको विकास गर्न लागेको छ । त्यस क्रिप्टोकरेन्सीलाई प्रयोगकर्ताले ह्वाट्सएपमार्फत पनि पठाउन सक्नेछन् । फेसबुक एउटा यस्तो ‘स्थिर मुद्रा’ बनाउँदैछ जसलाई प्रयोगकर्ताले..
सन्नी लियोनीलाई पनि जितिन् यी युवतिले
एजेन्सी । गएको वर्ष भ्यालेनटाई डेको छेकोमा आँखा झिम्क्याएर चर्चामा आएकी भारतीय नायिका प्रिया प्रकाश सर्च इन्जिन गुगलमा सबै भन्दा धेरै खोजिने पात्र बनेकी छिन् । भारतियहरुले सर्ज इन्जिनमा उनलाई..
Results 266: You are at page7of 9